နေတိုး ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးနောက် ရုရှားနိုင်ငံ၏ မဟာဗျူဟာမြောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ်များ ဘောလ်တစ်ပင်လယ်ပေါ်တွင် ကင်းလှည့် - Xinhua News Agency
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သပိတ်ကျင်းမြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက်၌ အင်အား ရစ်(ခ်)တာစကေး (၆.၃)အဆင့်ရှိ အင်အားပြင်းထန်သော မြေငလျင်တစ်ခု လှုပ်ရှား
မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အချို့၌ ရေကြီးရေလျှံမှုများ ကြုံတွေ့ရသဖြင့် ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအား ဘေးလွှတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်း
တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်သွယ်မှုက ဆယ်စုနှစ်သုံးခုအတွင်း ၈၅ ဆ တိုးတက်လာ
တရုတ်နိုင်ငံက Tianhui I-04 ဂြိုဟ်တု လွှတ်တင်
တရုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှု တပ်ဖွဲ့ဝင် အုပ်စုအသစ် လက်ဘနွန်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာ
တရုတ်နိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်းက ဆီးရီးယားနိုင်ငံအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ၁၅၀,၀၀၀ ပံ့ပိုးကူညီ
တရုတ်နိုင်ငံက ဟဲနန်ရေဘေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ယွမ် ၃ ဘီလီယံ ခွဲဝေသတ်မှတ်
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဇူလိုင် ၂၆ ရက်က ထပ်တိုးကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ (၇၁) ဦး ရှိ၊ ၎င်းတို့အနက် (၃၁)ဦးမှာ ပြည်တွင်းကူးစက်မှုများ ဖြစ်
ရုရှားနိုင်ငံက ပဥ္စမမျိုးဆက် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအခြေစိုက် တိုက်လေယာဉ် စတင်တီထွင်
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသို့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ပိုမိုထောက်ပံ့ရန် ယူနီဆက် နှင့် Sinovac သဘောတူ
အမေရိကန်နိုင်ငံ အလက်စကာကမ်းလွန်တွင် ပြင်းအား ၈.၁ အဆင့်ရှိ အင်အားအလွန်ပြင်းထန်သော ငလျင်လှုပ်ခတ်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဟီမာချယ်ပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခြင်းကြောင့် ရေကြီးရေလျှံမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး လူ ၁၆ ဦး သေဆုံး
အမေရိကန်နိုင်ငံ တက္ကဆက်ပြည်နယ်ရှိ ဆရာများက စာသင်ကျောင်းတွင် နှာခေါင်းစည်း မတပ်မနေရ အမိန့်ထုတ်ရန် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား တိုက်တွန်း
အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်က ထိန်းချုပ်ထားသော ကက်ရှ်မီးယားဒေသ၌ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် လူ ၅ ဦး သေဆုံးပြီး လူ ၄၀ ခန့် ပျောက်ဆုံးနေ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း၌ ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် လူ ၁၅ ဦး ထက်မနည်း သေဆုံး
ဂျပန်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း မီယာဂီစီရင်စုတွင် Nepartak တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဝင်ရောက်
တိုကျို အိုလံပစ်ပွဲတွင် COVID-19 ရောဂါပိုး တွေ့ရှိသူ နောက်ထပ် အားကစားသမားနှစ်ဦး ထပ်တိုး
အမေရိကန်နိုင်ငံက အီရတ်နိုင်ငံရှိ စစ်ဆင်ရေးမစ်ရှင်ကို ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် အဆုံးသတ်မည်
ဝန်ကြီးချုပ်ထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက် အစိုးရအဖွဲ့အားဆန္ဒပြမှုကို တူနီးရှားစစ်တပ်က လုံခြုံရေးတင်းကြပ်စွာဖြင့် ပိတ်ဆို့ထား
Europe World မြန်မာ-中文
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့တွင် Victory Air Parade အတွင်း မဟာဗျူဟာမြောက် ဗုံးကြဲလေယာဉ် Tu-160 တစ်စင်းအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေ ၉ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
မော်စကို၊ ဇွန် ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဘရပ်ဆဲလ်မြို့တွင် မြောက်အတ္တလန္တတိတ် စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံများအဖွဲ့ (NATO) ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ကျင်းပပြီးနောက် ရုရှားနိုင်ငံ၏ Tu-160 မဟာဗျူဟာမြောက် ဗုံးကြဲလေယာဉ်နှစ်စင်းသည် ဇွန် ၁၅ ရက်က ဘောလ်တစ်ပင်လယ်၏ ကြားနေရေပိုင်နက်အထက် ပျံသန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ရုရှားနိုင်ငံ၏ Su-35S နှင့် Su-27 တိုက်လေယာဉ်များ လိုက်ပါခြံရံလာသော ဒုံးကျည်သယ်ဆောင်ရေးလေယာဉ်များ ပျံသန်းမှုသည် အချိန် ၈ နာရီကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်း ရုရှား ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။
မစ်ရှင်၏ တိကျသောအဆင့်များတွင် ရုရှားလေယာဉ်များသည် အီတလီ၊ ဒိန်းမတ်နှင့် ဆွီဒင် စစ်လေယာဉ်များနောက်၌ လိုက်ပါပျံသန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ရုရှားဗုံးကြဲလေယာဉ်များ ပျံသန်းမှုသည် လေပိုင်နက်အသုံးပြုချက်အတွက် နိုင်ငံတကာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ အပြည့်အဝဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက ဖြည့်စွက်ဖော်ပြခဲ့သည်။
နေတိုး ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏ ဇွန် ၁၄ ရက် ကြေညာချက်အရ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်ခေါင်းဆောင်များသည် ရုရှားနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ရန် လမ်းဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Russian strategic bombers patrol Baltic after NATO summit
MOSCOW, June 15 (Xinhua) — Two Russian Tu-160 strategic bombers flew over neutral waters of the Baltic Sea on Tuesday shortly after the North Atlantic Treaty Organization wrapped upasummit in Brussels.
The flight of the missile carriers, accompanied by Russia’s Su-35S and Su-27 fighters, took eight hours, the Russian Defense Ministry said.
At certain stages of the mission, the Russian aircraft were followed by Italian, Danish and Swedish warplanes.
The Russian bombers flight was carried out in full compliance with international rules for the use of airspace, the ministry added.
According toacommunique of the NATO summit on Monday, leaders of the military alliance are open to political dialogue. ■
A strategic bomber Tu-160 is seen during the Victory Air Parade in Moscow, Russia, May 9, 2020. (Photo by Evgeny Sinitsyn/Xinhua)
ပိုလန်နိုင်ငံအစိုးရ သည် COVID-19 စတုတ္ထလှိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတိပေး